10 Jaamacadood ee ugu sarreeya Cuba ee Ardayda Caalamiga ah 2022
Mawduucan maqaalku wuxuu muujinayaa jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah ee doonaya inay wax ku bartaan Kariibiyaanka. Faahfaahinta iyo xiriiriyeyaasha degellada rasmiga ah ee mid kasta oo ka mid ah jaamacadaha Cuba ayaa sidoo kale lagu bixiyay maqaalkan si ay awood kuugu siiso inaad ku sameyso cilmi baaris shaqsiyeed dheeraad ah dugsiga aad dooratay.
Jamhuuriyadda Cuba, oo ku taal Waqooyiga Ameerika, waa waddan wadaag ah oo ka kooban jasiiradda Cuba iyo sidoo kale jasiirado kale. Waddanku wuxuu caan ku yahay waddan shuuci ah bilicdiisuna waa mid ka mid ah meelaha safarka ugu sarreeya ee dalxiisyada iyo dalxiiska. Waxaa jira jasiirado badan oo qurux badan iyo goobo soojiidasho dalxiis oo aad ku qaadan karto kuna raaxeysan karto waqti tayo leh kuwa aad jeceshahay.
Cuba waligeed laguma aqoonin inay bixiso waxbarashadeeda, sidoo kale, xaqiiqdii looma aqoonsana inay ka mid tahay xarumaha waxbarasho ee adduunka ugu sarreeya, awooddeeda waxbarashona waa lagu hayaa meel hoose. Anigoo baaraya qoritaanka maqaalkan, waxaan ogaaday jaamacadaha kuyaala Cuba inay runti bixiyaan qaar kamid ah barnaamijyada heerka sare ee Waqooyiga Ameerika iyo kumanaan arday caalami ah oo halkaas kusii qulqulaya sanadkiiba mar si ay ugu amraan waxbarashadeeda tayada, qaab nololeedka, iyo taariikhdeeda.
Muwaadiniintu waxay saaxiibtinimo la leeyihiin ajaanibta, jaamacadaha waa raqiis, qiimaha nolosha waa mid la awoodi karo, waxaad ku amri kartaa quruxda laga arko waddanka, waxaadna kasban doontaa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu sarreeya Waqooyiga Ameerika. Sidoo kale, adigoo ah arday caalami ah oo dhigta jaamacad Cuban ah, waxaad ka faa'iideysan kartaa daryeelka caafimaad ee aadka u wanaagsan ee qof walba u xor u yahay.
Barnaamijyada shahaadada ugu caansan ee Cuba waa Waxbarashada, IT-ga, Sayniska Kombiyuutarka, Sayniska & Xirfadaha, injineernimada, dhaqaalaha, iyo beeraha. Barnaamijyadan waxaa bixiya in ka badan 15 jaamacadood oo ku yaal Cuba, in kasta oo barnaamijyo kale oo shahaadooyin caafimaad iyo farshaxan ah la bixiyo laakiin jaamacado aad u tiro yar.
Haddii aad rabto inaad wax ku barato Cuba, waxaad u baahan tahay inaad ogaato jaamacadaha kugu habboon. Go'aanka xulashada halka aad wax ku baraneyso Cuba waa mid ka mid ah go'aamada ugu weyn ee aad waligaa sameyn doonto, mahadsanid, qoraalkan balooggan ayaa si gaar ah loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad sameyso xulashada saxda ah.
Si aan kaaga caawiyo baaritaanka jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah, waxaan diyaariyey liis ay ku qoran yihiin jaamacadahaan sidoo kale waxaan kala hadlay faahfaahintooda taasoo kaa caawin doonta inaad go'aansato halka aad wax ku baraneyso laakiin ka hor intaadan guda gelin fiiri su'aalaha la xiriira mowduucan. arrinta hoos ku xusan.
Immisa ayey ku kacaysaa in wax laga barto Cuba?
Jaamacadda Cuba miyaa lacag la’aan ah?
Jaamacadaha ku yaal Cuba ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
1. Jaamacadda Havana
2. Jaamacadda Cienfuegos
3. Jaamacadda Granma
4. Jaamacadda Camaguey
5. Jaamacadda "Marta Abreu" ee Las Villas (UCLV)
6. Jaamacadda Holguin
7. Jaamacadda Sayniska Macluumaadka (UCI)
8. Jaamacadda Pinar del Rio (UPR)
9. Jaamacadda Teknolojiyada ee Havana Jose Antonio Echeverria (CUJAE)
10. Jaamacadda Santiago de Cuba
Kharashka wax ku barashada Cuba wuxuu ku kala duwan yahay jaamacad, sidaas darteed, maahan mid go'an. Si kastaba ha noqotee, khidmadda khidmadda waxbarashada ee lagu dhigto Jaamacadda Cuban waxay ku dhowdahay $ 20,000 illaa $ 40,000, maahan sanadkii, laakiin muddada dhan ee koorsada aad dooratay.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah khidmadaha waxbarashada gaarka ah machadka aad doorbideyso.
Qiimaha nolosha, $ 100 ilaa $ 200 waa waxa aad ugu baahan tahay inaad ku noolaato bil gudaheed halka kirada iyo korontada ay ku kici karaan qiyaastii $ 150 illaa $ 260 bishii.
Jaamacadaha gobolka iyo kuwa dowliga ah ee Cuba waxay si adag wax ugu bartaan muwaadiniintooda laakiin ardayda caalamiga ah waxaa laga qaadaa lacag. Marka, halka jaamacadaha Cuba ay xor u noqon karaan muwaadiniinta maahan ardayda ajnabiga ah.
Shisheeyeyaashu gabi ahaanba wax bay ku baran karaan Cuba, haddii aysan kari karin qoraalkaan blog-ka xitaa lama daabacayo meesha ugu horreysa, illaa iyo inta ay ka soo baxayaan shuruudaha sida fiisaha ardayda, warbixinta caymiska caafimaadka, waraaqaha talo bixinta, qoraalka rasmiga ah ee tacliinta, iyo shuruudaha kale ee gelitaanka tacliimeed ee ay dejiso machadooda ay doorbidaan.
Luuqadda wax lagu barto ee jaamacadaha Cuba waa Isbaanish sidoo kale waa luqadda rasmiga ah ee dalka, codsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay ku fiicnaadaan luuqada Isbaanishka. Tani waxay u noqon kartaa carqalad haddii aadan fahmin luqadda laakiin haddii aad runtii xiiseyneyso inaad ka qayb gasho jaamacadda halkan, waxaad ku bilaabi kartaa barashada Isbaanishka adigoo iska diiwaangelinaya koorsada degdegga ah ee 1-sano ee Isbaanishka.
Iyada oo si cad loo arkay, waxaa la joogaa waqtigii aan u qornay jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad adeegsato khariidad si aad u hubiso halka ay ku yaalliin jaamacadahaan Cuba, iyo haddii mid ka mid ah hay'adaha aad xiiseyneyso, waxaad riixi kartaa “Booqo bogga” badhanka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ma ahan dhammaan jaamacadaha Cuba inay qiraan ardayda caalamiga ah, laakiin halkan waxaan kala hadlay jaamacadaha ugu sarreeya Cuba ardayda caalamiga ah inay dalbadaan shahaadada koowaad ama barnaamijka qalin-jabinta ee ay doortaan. Sii wad akhriska…
Jaamacadda "Marta Abreu" ee Las Villas (UCLV)
Jaamacadda Sayniska Macluumaadka (UCI)
Jaamacadda Pinar del Rio (UPR)
Jaamacadda Teknolojiyada ee Havana Jose Antonio Echeverria (CUJAE)
Jaamacadda Santiago de Cuba
Jaamacadda Havana waxaa la aasaasay 1728, oo ku taal degmada Vedado ee Havana, waana mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah. Iskuulku wuxuu leeyahay arday caalami ah oo hadda ah 6% wuxuuna kujiraa maya. 44 jaamacadaha ugu sareeya Latin America. Waa hay'ad waxbarasho oo ugu weyn, ugu da'da weyn, uguna hoggaamineysa Cuba, iyo mid ka mid ah jaamacadihii ugu horreeyay ee laga aasaasay Ameerika.
Jaamacadda Havana waxaa ku yaal 16 kulliyadood iyo 14 xarumo cilmi-baaris oo ku saabsan dhinacyo kala duwan, oo ay ku jiraan dhaqaalaha, sayniska, sayniska bulshada, iyo cilmiga aadanaha. Wadar ahaan 25 takhasus ayaa laga bixiyaa jaamacadda oo leh takhasusyo siyaasadeed, daraasadaha Afro-Caribbean, muusikada, suugaanta, falsafada, cilmiga bulshada, taariikhda, falsafada, cilmiga bulshada, taariikhda, bayoolajiga, iyo xiriirka caalamiga.
Ardayda ka socota dhammaan qaybaha nolosha ayaa loo dhigaa barnaamijyadan sannad kasta si ay u dhammaystiraan shahaadada koowaad ee jaamacadda, mastarka, iyo shahaadada dhakhaatiirta. Luqadda waxbarashadu waxay ku wada jirtaa Isbaanish
Waxay ku taal Cienfuegos, Cuba, oo la aasaasay 1979, Jaamacadda Cienfuegos waa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah. Waxay ku yaalliin jaamacadda afarta waaxood: Agrarian Sciences, Economic and Enterprise Sciences, Engineering, and Social Sciences and Humanities.
Jaamacaddu waxay aqbashaa ardayda ka socota dhammaan qaybaha nolosha ee buuxiya dhammaan shuruudaha gelitaanka. Waxaa jira shahaadooyin jaamacadeed oo kala duwan iyo shahaadada mastarka iyo sidoo kale laba Ph.D. barnaamijyada sayniska farsamada iyo cilmiga barbaarinta.
Jaamacadda Granma waa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah sidoo kale waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Cuba ardayda caalamiga ah. Waa hay'ad dawladeed oo dugsi sare ah oo tacliin sare ah oo la aasaasay 1976 si ay u siiso waxbarasho muwaadiniinteeda maxalliga ah iyo sidoo kale ajaanibta.
Hadaf ah in si firfircoon gacan looga geysto horumarka waara ee gobolka bari iyo dalka, iyada oo loo marayo tababaro dhameystiran oo xirfadlayaal ah, horumarinta sayniska, iyo sare u qaadista dhaqanka oo leh awood karti leh, iskuulku wuxuu ku siin doonaa waxbarasho tayo sare leh barnaamijka aad dooratay
Jaamacadda Camaguey waa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah, waxay ku taal Camaguey, Cuba, waxaana la aasaasay 1967. Machadku wuxuu leeyahay sagaal kulliyadood oo bixiya barnaamijyo shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta ah ee barnaamijyo kala duwan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Sagaalka kulliyadood waa Cilmiga Bulshada, Isgaarsiinta & Luuqadaha, Dhaqaalaha, Dhismaha, Farsamo-yaqaanada, Sayniska la adeegsado, Sayniska Kombiyuutarka, Sayniska barbaarinta, iyo Isboortiga. Jaamacadda Camaguey waa mid sharaf ku leh dalka maadaama ay aqoonsan tahay Wasaaradda Tacliinta Sare ee Cuba.
Iskuulku waa cilmi baaris wuxuuna leeyahay 8 daabacadood oo ku saabsan wax soo saarka xoolaha, maamulka, waxbarashada, beeraha, deegaanka, dhismaha iyo isboortiga.
UCLV waa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah ee bixisa barnaamijyo badan oo isugu jira shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta. Iskuulka waxaa la aasaasay 1952 wuxuuna ku yaal Topes de Collantes, wadnaha buuraha Escambray.
Barnaamijyada tacliinta ee UCLV waxaa loo qaybiyaa 13 waaxood, kulliyadaha:
Sayniska Macluumaadka iyo Waxbarashada
Chemistry - Farmashiyaha
Xisaabta - Fiisigiska - Sayniska Kombiyuutarka
Injineernimada Warshadaha iyo Dalxiiska
Waxaa kuqoran UniRank oo ah 2nd jaamacada ugufiican Cuba sidookale kaalinta 101st jaamacada ugufiican Latin America.
Jaamacadda Holguin waa hay'ad dawladeed oo dugsi sare oo tacliin sare ah oo la aasaasay 1973 iyo mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah, waxay leedahay 8 kulliyadood oo kala ah: Xogta & Xisaabta, Dhaqaalaha, Injineerinka Warshadaha & Dalxiiska, Injineerinka, Sayniska Beeraha, Dadnimada, Sharciga, iyo Cilmiga Bulshada. Iskuulku wuxuu kujiraa "iskuulka ugu fiican Holguin" UniRank iyo 14th ugu fiican Cuba.
Iyada oo loo marayo kulliyadeeda, dugsigu wuxuu bixiyaa waxbarasho tayo leh oo ka timaadda dhammaan qaybaha nolosha ee buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka.
UCI waa hay'ad cusub oo dugsi sare kadib oo la aasaasay 2002 waxayna aqbashaa ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha barnaamijyada soo socda: Injineerinka Sayniska Macluumaadka, Bioinformatic Engineering, iyo Injineernimada Cybersecurity. Hay'addu waxay mudnaanta siisaa daraasadaha cilmi-baarista iyo kalsoonida macluumaadka oo ah mid ka mid ah sababaha ay u aqbalaan ardayda caalamiga ah.
UCI waxay tababbaraysaa xirfadlayaal aqoon u leh cilmiga sayniska kumbuyuutarka waxayna soo saaraan codsiyo iyo adeegyo kombuyuutar, iyagoo u adeegaya sidii ay u taageeri lahaayeen warshadaha softiweerka Cuba. Waxay sidoo kale leedahay tirada ugu badan ee ardayda caalamiga ah laakiin barnaamijyada oo dhan wali waxaa lagu baraa Isbaanishka iyo codsadayaasha ajaanibta ah ee ka socda wadamada aan ku hadlin Isbaanishka waa inay qaataan imtixaan aqoon Isbaanish ah oo la aqoonsan yahay oo ay soo gudbiyaan dhibcaha qayb ka mid ah codsigooda.
Waxaa la aasaasay 1972 waana mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah, waa natiijada isku darka 3 iskuul: Jaamacadda cilmiga barbaarinta "Rafael Maria de Mendive", Kulliyadda Dhaqanka Jirka "Nancy Uranga" iyo Jaamacadda "Hermanos Saiz Montes de Oca".
Iskuulku wuxuu leeyahay toddobo kuliyadood oo kala ah: Waxbarashada Carruurta, Waxbarashada Dhexe, Cilmiga Dhaqaalaha & Ganacsiga, Dhaqanka Jirka, Sayniska Farsamada, Cilmiga Beeraha & Kaymaha, iyo Sayniska Bulshada & Aadanaha. Ardayda caalamiga ah waa laga aqbalaa dhammaan waaxyadan, khidmadda waxbarashaduna sidoo kale waa raqiis.
CUJAE waxaa la aasaasay 1964 waana mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah, waxay leedahay sagaal kulliyadood iyo 13 qaybo waxbarasho. Kulliyaduhu waa qaab dhismeedka, otomatiga & injineernimada injineernimada, injineernimada bulshada, injineernimada warshadaha, injineernimada farsamada, injineernimada kiimikada, injineernimada kombiyuutarka, iyo injineernimada isgaarsiinta.
Maaddaama ay tahay dugsi farsamo waxay si aad ah ugu tiirsan tahay koorsooyinka tikniyoolajiyadda waxayna aqbashaa arday badan oo caalami ah. Sida laga soo xigtay UniRank, waa 4th jaamacadda ugu wanaagsan dalka iyo 2dand ugu fiican Havana. Buuxinta shuruudaha ayaa si fudud kuugu geyn doonta iskuulkan si aad u sii wadato barnaamijka aad dooratay.
Jaamacadda waxaa la aasaasay 1947 waxayna ku taalaa Santiago de Cuba, waa hay'ad dawladeed waana mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal Cuba ardayda caalamiga ah. Iskuulku wuxuu leeyahay 12 kulliyadood oo jaamacaddu u qaybsan tahay:
Dhaqaalaha & Maamulka
Xisaabta & Sayniska Kombuyuutarka
Kulliyadahan ayaa ardayda ka qaata dhammaan qeybaha kala duwan ee nolosha noocyada kala duwan ee barnaamijyada qalin-jabinta iyo shahaadada koowaad. Jaamacadu sidoo kale waxay leedahay mid ka mid ah tirada ugu badan ee ardayda caalamiga ah iyo cilmi baarayaasha jaamacadaha ku yaal Cuba.
Kuwani waa jaamacadaha Cuba ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, dhagsii xiriirka si aad wax badan uga ogaatid shuruudaha barnaamijyada gaarka ah ee mid kasta oo ka mid ah iskuulada tan iyo markii ay kala duwan yihiin sidoo kalena ay arkaan nidaamka arjiga iyo waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga.
Dukumiintiyada guud ee la diyaarinayo waa:
Qoraalka rasmiga ah ee qoraalka
Shahaadada Bachelor-ka ee codsadayaasha qalin jabiya
Dhibcaha imtixaanka aqoonta Isbaanishka
Dukumiintiyadan waa inay ku jiraan faylalkaaga haddii aad codsaneysid qalin-jabinta ama barnaamijka shahaadada koowaad ee mid ka mid ah jaamacadaha Cuban. Waad sii wadi kartaa inaad hubiso shuruudaha iskuulka aad xiiseyneyso iyo shuruudaha barnaamijka, dhammaystirto shuruudaha, oo aad bilowdo habraacyada dalabka.
Dhamaan iskuuladan waxay wax ku bartaan luuqada Isbaanishka, sidaa darteed, waa inaad barataa luuqada hadaadan aqoon sida loogu hadlo, waxaa jira qaabab aad ku baran karto internetka ama qof ahaan.
8 Iskuul oo loogu talagalay MBA-da Mareykanka oo aan lahayn GMAT Ardayda Caalamiga ah
Sidee Adeeg Bixiyeyaasha Is-Kaydinta ah uga Caawiyaan Ardayda Caalamiga ah Nidaamkooda Guuritaanka
jaamacadaha Cuba ardayda caalamiga ah
Previous Post:Sida Loo Helo Ogolaanshaha MBBS-ka Kanada | Hagaha buuxa
Post Next:Sida loo Dalbo Jaamacada Kanada - Tilmaamaha Talaabada Tilmaamaha